Sunday April 17, 2022 - 11:23:15
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in ciidanka Pakistan ay Tobaneeyo qof shacab ah ku dileen deegaanno dhaca xuduud beenaadka kadib markii ay geysteen duqeymo aan kala sooc laheyn.
Imaarada Islaamiga ah ayaa sheegtay in 42 qof shacab ah ku dhinteen duqeymo xiriir ah oo diyaaradaha dagaalka dowladda Pakistan ay ka geysteen gobollada Khoosti iyo Konaar oo dhammaantood dhaca Bariga Afghanistan.
Xukuumadda Islaamiga Afghanistan ayaa uyeertay safiirka Pakistan ee magaalada Kaabuul iyadoo ugudbisay cabashada ay ka qabto duqeymaha laayaanka ah ee ka dhacay Bariga wadankaasi.
Wasaaradda arrimaha dibadda Imaarada Islaamiga ah waxay sheegtay in Pakistan ay ugudbisay cabasho ku saabsan xasuuqa ay diyaaradaheeda dagaalka ugeysteen shacabka Rayidka ah.
Mas'uuliyiin ku sugan Bariga Afghanistan ayaa sheegay in diyaaradaha Pakistan ay duqeeyeen illaa 4 tuulo oo katirsan gobolka Khoosti waxaana halkaas ku dhintay dad ubadan carruur iyo haween.
"dhammaan dadka labeegsaday waa rayid aan wax cilaaqa ah la laheyn xarakada Taliban iyo xukuumadda intaba, magaran karo sababta noola beegsanayo" sidaas waxaa yiri Rasuul Jaan oo kamid ah dadka deegaanka.
Tan iyo markii ay Imaarada Islaamiga ah la wareegtay talada Afghanistan ayuu melleteriga Pakistan sare uqaaday dhaq dhaqaaqyada uu ka wado deegaannada xuduud beenaadka dhaca wuxuuna ku andacoonayaan in jamaacadaha Jihaadiga Taliban Pakistan ay kusii xoogeysanayso gudaha Afghanistan ayna ka hortagayaan weeraradeeda.
Xukuumadda dabadhilifka Pakistan iyo ciidankeeda melleteriga ayaa taariikh madoow ku leh dagaalka Afghanistan waxayna ciidamadan gacan ka geysteen duullaankii saliibiga ahaa ee Mareykanka iyo xulufadiisa ay ku qaadeen muslimiinta Afghanistan dabayaaqadii sanaddii 2001.
Dowladda Mareykanka ayaa markii ay ciidamadeeda kala baxday Afghanistan waxaa soo baxayay warar sheegaya in qaar kamid ah wadamada dariska ah ay kasoo abaabuli doonto weeraro xagga cirka ah ee ka dhan ah shacabka muslimiinta.
Warbixinno ay warbaahinta reergalbeedku daabacday bishii November 2021 ayaa sheegayay in Washington ay Islam'abad ka dalbatay saldhig melleteri oo CIA-du kala socoto xaaladda Afghanistan balse warbixinadaas waxaa beenisay xukuumaddii madaxda ka ahaa Cimraan Khaan.